बाहिरियो दक्षिण भारतीय फिल्मकै सुन्दर जोडी सामन्था र नागा चैतन्यको डिर्भोषको अचम्मको कारण! | Rochak
September 18, 2021 NepstokLeaveaComment on बाहिरियो दक्षिण भारतीय फिल्मकै सुन्दर जोडी सामन्था र नागा चैतन्यको डिर्भोषको अचम्मको कारण!
दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगका दुई ठूला नाम, सामन्था अक्किनेनी र नागा चैतन्य बारे केहि यस्ता समाचारहरु प्राप्त भएका छन जुन उनीहरुका प्रशंसकहरुलाई पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ। भर्खरै, अभिनेता मनोज बाजपेयीको वेब सिरिज ‘द फ्यामिली म्यान-सीजन २’ मा देखीएको सामन्था एक धेरै ठूलो दक्षिण अभिनेत्री हुन् र उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन को लागी आजकल हेडलाइन्स बनाइरहेकी छिन्।
त्यस्ता जानकारी बाहिर आएको छ कि उनले आफ्नो पति र दक्षिण को अभिनेता नागा चैतन्य संग सम्बन्ध विच्छेद गरेको खबर बाहिरिएको थियो। केहि मिडियाको जानकारी आनुसार यी दुबैले आफ्नो परिवार बढाउने योजनामा ​​थिए। भनिन्छ कि सामन्था आफ्नो पति बाट बच्चा चाहन्थिन् र दुबै जना आफ्नो परिवार लाई अगाडि बढाउने सोचमा थिए।
यसैबीच, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग पनि उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको खबरले चिन्तित भएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो पनि सुनिन्छ कि उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको खबर सुनेपछि साउथ इन्डस्ट्री रिसाएको छ। सबैलाई थाहा छ को सामन्था पारिवारिक केटि हुन् आफ्नो परिवारलाई सबै भन्दा पहिला प्रथामिकता दिन्छिन ।
यस कारण उनले धेरै ठूला परियोजनाहरु लाई पनि अस्वीकार गरेकि थिइन् । भनिएको छ कि सामन्था सधैं आफ्नो परिवार लाई धेरै महत्व दिन्छिन् र उनले आफ्नो काम र परिवार को बीच एक सन्तुलन कायम बनाएर राख्छिन ।
उसका साथीहरु, निर्देशकहरु, निर्माताहरु र जो उसलाई चिन्छन् सामन्था को परिवार को महत्व को बारे मा राम्ररी जान्दछन्। यस्तो स्थिति मा जो व्यक्तिहरु पनि सम्बन्ध विच्छेद को खबर सुनेर आश्चर्यचकित हुन्छन ।हामी तपाईलाई बताऔं कि दुबै कलाकारहरु बाट यस बिषय मा अहिले सम्म केहि भनिएको छैन। उनीहरु दुवैले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा कुनै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन्।
यो ध्यान दिन लायक छ कि केहि दिन पहिले, सामन्थाले उनको सम्बन्ध विच्छेद को खबर गलत बताएको थियो र मिडिया पनि यस मामला मा कडा निन्दा गरिएको थियो। तर जब उनीहरुको सम्बन्ध मा दरारको संकेत देखियो जब सामन्थाले उनको नाम बाट उनको पतिको नाम हटाएकी थिईन । उनीहरु लगभग ४ बर्ष सम्म रिलेशनशिप मा बसेपछि २०१७ मा विवाह गरेका थिए ।